साताको अन्तिम कारोबार दिन १६ अर्ब ९० करोडको शेयर कारोबार, परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा
जेठ २०, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार शेयर बजारमा रू. १६ अर्ब ९० करोड ७० लाख २० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
२१८ ओटा कम्पनीको १ लाख ५५ हजार ६५५ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको ३ करोड ४६ लाख ९१ हजार ३१२ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
अघिल्लो कारोबार दिनको रू. ११ अर्ब ३५ करोड १८ लाख १५ हजार बराबरको २ करोड २६ लाख १३ हजार २९ कित्ता शेयर कारोबार भएको बजारमा बिहीवार भने कारोबार रकम र कित्तामै वृद्धि भएको हो ।
अघिल्ला दुई कारोबार दिनमा सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलेकै बिहीवार पनि सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रू. १ अर्ब २ करोड ७० लाख २७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
अघिल्ला दुई कारोबार दिन मूल्य बढेको उक्त कम्पनीको बिहीवार भने प्रतिकित्ता रू. २५ ले मूल्य घटेको छ । यस दिन कम्पनीको अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ७६५ कायम भएको हो । बिहीवार उक्त कम्पनीको ५ लाख ७१ हजार ११५ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च २ हजार ८५६ दशमलव ७७ विन्दुमा पुगेको छ । यस अघि गत आइतवार कायम गरेको २ हजार ८२७ दशमलव ९३ को रेकर्डलाई पनि बिहीवार नेप्से परिसूचकले ब्रेक गरेको हो । यो दिन परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनभन्दा २९ दशमलव ५५ अंक अर्थात् १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले बढेको हो ।
उता, सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात ७ दशमलव ९६ अंकले बढेर ५१३ दशमलव ११ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचकले बजारको समग्र कारोबार मापन गर्दछ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्सले ठूला कम्पनीहरुको मात्र कारोबार मापन गर्दछ ।
बिहीवारको बजारबाट वित्त, होटल्स तथा पर्यटन र विकास बैंकका शेयरधनीहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । यो दिन विकास बैंकको समूहगत परिसूचक सर्वाधिक ३ दशमलव ७४ प्रतिशत बढेको छ भने वित्तको ३ दशमलव ३४ प्रतिशत र होटल्स तथा पर्यटनको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यस्तै, बैंकिङ्गको २ दशमलव ७१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको १ दशमलव २२ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको १ दशमलव २९ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
यो दिन जलविद्युत् समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् । जलविद्युत् समूहको २ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले परिसूचक घटेको छ भने व्यापारिकको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत र अन्य समूहको शून्य दशमलव ७२ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो ।
जलविद्युत् समूहको परिसूचक सर्वाधिक घट्दा पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर र राधी विद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक घटेको छ । पञ्चकन्यामाई हाइड्रोको ५ दशमलव ९२ प्रतिशत र राधी विद्युत्को ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो ।
यस दिन पञ्चकन्यामाई हाइड्रोको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १८ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २८६ र राधी विद्युतको प्रतिकित्ता रू. ६१ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार १४५ कायम भएको हो ।
यस दिन चार ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा बढेको छ । मञ्जुश्री फाइनान्स र महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य १० प्रतिशत, गोर्खाज फाइनान्सको ९ दशमलव ६८ प्रतिशत र ग्रिन डेभलपमेण्ट बैंकको ९ दशमलव ५५ प्रतिशतले मूल्य बृद्धि भएको हो ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ७५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ८२५ र महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. ४३२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४ हजार ७५२ कायम भएको छ । त्यस्तै गोर्खाज फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. ९० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार २० र ग्रिन डेभलपमेण्ट बैंकको प्रतिकित्ता रू. ३० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३४४ पुगेको छ ।